Sous-दृश्य - यो के हो? विशेष पकाउने Sous-vide प्रविधि
आज, झन् सुने पाक शब्द "Sous-दृश्य।" यो के हो, तथापि, हरेक महिला थाह छ। हो, र हरेक महाराज "पुरानो जमानाको" किनभने उसलाई थाहा छैन, कि शब्द जस्तै, प्रयोग गर्ने। किनभने यो तपाईं कम तापमान मा खाना पकाउन र अझै पनि यसको संरचना कायम गर्न अनुमति दिन्छ बीच, प्रत्येक पारित दिन यो प्रविधि यसलाई थप र अधिक लोकप्रिय बन्नेछ। तसर्थ, हामी यसको सबै भिटामिन र पोषक पनि कायम रहन्छ, जो शुद्ध खाना प्राप्त। पहिलो, यो विधि भ्रम हुन सक्छ, तर अन्ततः यसको आकर्षण को सबै कदर र Sous-दृश्य महसुस गर्न सिक्न - साँच्चै सुन्दर छ।
Sous-दृश्य - यो के हो? यस्तै प्रश्न, पहिलो स्थानमा आग्रह गरियो पकाउने एक यस्तो विधि को कहिल्यै सुनेका भएकाहरूलाई। Sous-दृश्य - एक निर्वात मा कम तापमान पकाउने खाना को एक प्रविधि हो। खाना बारेमा धेरै थाहा मासु उम्दा restaurateurs को देश - त्यहाँ फ्रान्स एक विधि थियो। प्रविधी महाराज जर्ज Prahl, एक फ्रान्सेली रेस्टुरेन्ट "Troisgros" मा काम गर्ने को आविष्कारक हुन मानिन्छ। नयाँ वैक्यूम प्रविधि संग, 1974 तयार foie gras मा खाना पकाउन।
तर जर्ज Prahl छैन मात्र एक, जो प्रविधि Sous-दृश्य दिनुभएको छ थियो। एकै समयमा अर्को मानिस आविष्कार थियो। र भयो कि सबै: सुरुमा, यो कुलीन प्रविधी उम्दा प्रतिष्ठानबाट लागि सिर्जना भएको थियो। रेस्टुरेन्ट मालिक, fastfudnyh संस्थाहरू नेटवर्क समावेश कसरी कठिन र मासु पकाउन महंगा प्रतियोगिता भन्दा धेरै राम्रो स्वाद छक्क परे। प्रशिक्षण द्वारा एक जैव रसायन विज्ञानी - यो समस्या समाधान गर्न, Restaurateur आफ्नो मित्र ब्रुनो Guss मदत मागे। उहाँले एक परिणाम रसदार र नरम भएको छ रूपमा मासु सुक्खामा यस्तो पकाउने विधि संग आउन मित्र सोधे। एउटै समयमा माथि उल्लिखित महाराज जर्ज Prahl foie gras को तयारी समयमा रूपमा गहिरिएर सोचेको बहुमूल्य बोसो बचत गर्नुहोस्। दुई सारा महाराज, एक निर्वात मा उत्पादन प्याक गर्न पानी सही तापमान मा डिप र एक लामो समय को लागि यो simmer, अघि अंदाजा छ: यसरी, एक र एउटै समयमा एउटै विचार दुई अन्य प्रहार आश्चर्यजनक। त्यसैले, पहिलो, एकदम कठिन थियो बुझ्न। हो यो कुरा छैन, त्यहाँ पकाउने को दुनिया मा एक नयाँ र शानदार पकाउने प्रविधि थियो मुख्य कुरा छ। र तरिका देखि निकासी धेरै सफलता प्राप्त भएको थियो पिउने प्रतिष्ठानबाट ग्रह मा।
विधि को संक्षिप्त विवरण
विधि निर्वात Sous vide खाना पकाउन र आफ्नो भण्डारण दुवै सम्बन्धित। यस प्रविधिको सम्पूर्ण सार निम्न छ: ताजा उत्पादन पकाउने लागि निर्वात झोला मा खचाखच भरिएको छ (आवश्यक यदि यो विभिन्न मसलाहरु राख्न) एक विशेष निर्वात प्याकेजिङ्ग मिसिन प्रयोग गरेर। त्यसपछि प्याकेज तातो पानी संग एक ट्रेमा जोडतोडले र एक समय को लागि एक निश्चित तापमान मा पकाएको छ। र त्यसपछि "निर्वात" उत्पादन चिसो तर्साउन पासोमा परे। फ्रिज कोठामा त्यस्तै workpiece एक लामो समय को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ।
तपाईं तालिका ल्याउन अघि, मासु व्यञ्जन ग्रिल वा स्वाद र सुनको खैरो बृद्धि गर्न पैन frying मा एक सानो भुट्नु हुन सक्छ। तापमान Sous-दृश्य खाना पकाउने 50-70 डिग्री छ। यो विधि लागि बिल्कुल खाना को कुनै पनि प्रकारको अनुरूप हुनेछ, तर यो सबै प्रविधिको सर्वश्रेष्ठ समुद्री खाना र माछा को तयारी को लागि उपयुक्त छ।
यस प्रविधिको लाभ
असाधारण लोकप्रियता यी दिन प्रविधि Sous-दृश्य छ। यो के हो हामी भन्नुभयो छन्, र अहिले यो विधि को लाभ सामना। यसैले, निर्वात पकाउने फलस्वरूप यी लक्ष्य हासिल:
1 पकाना वा मासु सतह तापमान को प्रभाव गर्न उत्तरदायी, जो स्ट्यान्डबाइ तापमान भन्दा उच्च धेरै पटक हो frying समयमा। प्रविधि Sous-दृश्य तपाईं भित्र र समाप्त उत्पादन माथि तापमान, बिस्तारै खाना पकाउनु नै, केही बाल्न र बाहिर सूखी हुनेछ अनुमति दिन्छ।
कम-तापमान प्रक्रिया सेल झिल्ली निष्ठा छोड्दा देखि2खाद्य, अधिक रसदार हुन।
3. वैक्यूम प्याकेजिङ्ग उत्पादन यसको सबै Smells र स्वाद को बीचमा बचाउँछ। यो पनि उत्पादन गर्न marinades र मसाले को राम्रो प्रवेश गर्न योगदान पुग्छ।
4 तापमान र खाना पकाउने समय सही चयन उत्पादन बढी नरम बनाउँछ। stewed वा उसिनेर कि मासु को ठोस टुक्रा, मांसपेशी कोलैजेन gelatin मा परिवर्तित छ। फलस्वरूप, पनि सबैभन्दा सस्तो कट यो एक ईश्वरीय बनावट र स्वाद हुनेछ भनेर यस्तो तरिकाले तयार गर्न सकिन्छ।
5 साधारण पकाउने संग हासिल गर्न असम्भव छ, जो कुरकुरा र ताजा बनावट यस तरिका तरकारी रहने, पकाएको।
के र कसरी खाना पकाउनु
तयारी विधि Sous-दृश्य एक घण्टा 20 मिनेट देखि पछिल्लो सक्छ। यो समय एक omelette को तैयारी, foie gras, एउटा सानो माछा लागि आवश्यक छ। तर कठिन मासु टुक्रा र पोर्क करङहरु दिन को एक जोडी तयार छन्। समय इच्छित तापमान खाना को अंश हीटिंग यसको कुल वजन निर्भर गर्दैन लागि आवश्यक छ, र यसको मोटाई को। खाना को घनत्व देखि समय खाना गर्ने अधिकार इच्छित तापमान आत्मीय सम्बन्ध गाँसे छ मा निर्भर गर्दछ। उत्पादन को कोमलता पकाउने अवधिको असर गर्छ।
एक पटक उत्पादन इच्छित तापमान पुगेको छ यस्तो पाठो मासुको चोक्टा, बाछाको मासु र पोर्क पट्टिका र शंख foie gras रूपमा नरम र नाजुक उत्पादन, प्रयोग गर्न योग्य हुन।
Sous vide विधि खाना पकाउने एक drawback छ। खाना 52 कम भन्दा डिग्री एक तापमान मा चार घण्टा भन्दा बढी लागि तयार छ भने, त्यो हो, जीवाणु वृद्धि को संभावना, botulism प्रकुपित। यस्तो अवस्थामा यी रोगजनकों भन्दा सहज लाग्छ। संक्रमण जोगिन, तपाईं चार अब भन्दा घण्टा तयार छन् ती उत्पादनहरु को लागि एक उच्च तापमान चयन गर्न आवश्यक छ।
धेरै connoisseurs को Sous-दृश्य प्रविधिले तयार उत्पादनहरु रुचाउँछु। के छ उनि सबै भन्दा आधुनिक रेस्टुरेन्ट यी व्यञ्जन मा विशेषज्ञता रूपमा, आफैले थाहा छ। यी व्यञ्जनहरु मात्र यसको स्वाद को लागि राम्रो हो, तर पनि लामो आफ्नो जीवन (यी व्यञ्जन भन्दा लागि उहाँले कम्तिमा पाँच दिन, उत्पादन र खपत दिन सहित छ)। तर केही खाद्य पदार्थ धेरै लामो लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ, तर केवल यी सर्तहरू experimentally प्रमाणित गरिएका घटनाको।
यसरी, माछा चार लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ - छ दिन, तर मासु र बाछाको मासु 25-30 दिन धेरै रूपमा सुरक्षित भइरहेको। पोर्क लागि, यो समय एक बिट कम: 15 18 दिन। को 10-18 दिनमा यो चरा राख्न सम्भव छ, र तरकारी को आफ्नो जीवन सबै रेकर्ड तोडेर छ। उहाँले 45 दिन छ।
कति क्यालोरी विभिन्न किसिमहरु को रोटी मा?
जहाँ किन्न पनीर "फिलाडेल्फिया"? यो कस्तो खाना पकाउनु?
कति porridge मन्न मा क्यालोरी? तालिका क्यालोरी तयार भोजन
रातो मासु: के यो उत्पादन मा निहित छ विशेष छ, किन यो यति भन्न धेरै छ?
यसलाई कच्चा कद्दू (मज्जा र बीउ) खान र कुनै पनि रोग को उपचार सम्भव छ?
टूमलाइन पटक आवेदन समीक्षा। टूमलाइन पटक पुस्तिका मूल्य, contraindications
Nulliparous र multiparous मा प्रसब को मुख्य precursors
डोरी कसरी चुल्ठो गर्न: चरण निर्देशनहरूको गरेर योजना र चरण
प्रभावकारी एंटीबायोटिक "Bioparox" प्रयोग को लागि निर्देश
आफ्नो हातमा काठको डुङ्गा
Rhubarb जाम - बाल्यकाल को अद्भुत स्वाद
युरोप मा कुल बीमा: समीक्षा
संसारको सबैभन्दा ठूलो फोन: कहाँ, कुन र कसले यो गरे?
पैसा कसरी निकाल्न घरबाट निकाल्ने?